February 11, 2020 – မြန်မာသတင်းစုံ
ရန်ကုန်၌ စီဘီဘဏ်ဝန်ထမ်းများအား သေနတ်ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်၍ ဘဏ်မှ ငွေကျပ်သိန်း(၆၀၀)ခန့် လုယူထွက်ပြေးသွားသူအား ဖမ်းဆီးရမိ နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ အမှတ်(၃၅)ရပ်ကွက်၊ ပင်လုံလမ်း နှင့် အဏ္ဏဝါလမ်းသွယ်ထောင့် အမှတ်(၁၂၁၇)ရှိ စီဘီဘဏ်၌ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ်အချိန်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦးက ဘဏ်ဝန်ထမ်းများအား သေနတ်ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ကာ ဗုံးဟု ယူဆရသော အရာဝတ္ထုကို ချထားခဲ့ပြီး ငွေကျပ်သိန်း(၆၀၀)ခန့် လုယူထွက်ပြေးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ သဖြင့် ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့မရဲစခန်း (ပ)၃၂၀/၂၀၂၀၊ Read more
သူမရဲ့ခြိုငျးအတှကျ ပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈ laser hair removal session စတငျပွုလုပျနတေဲ့နခွေညျဦး
မငျးသမီးခြောလေးနခွေညျဦးကတော့ အောငျမွငျနတေဲ့ အနုပညာရှငျတှထေဲမှာတဈယောကျအပါအဝငျဖွဈပွီး ပရိသတျအားပေးမှုအခိုငျအမာရရှိထားသူလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ စိတျဝငျစားအာရုံစိုကျခွငျးကို ခံနရေတဲ့ မငျးသမီးခြောလေးတဈယောကျဖွဈပွီး ယခုမှာ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှကေိုလညျး ရိုကျကူးနသေူလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ သှကျလတျတဲ့ စကားပွောပုံလေးတှေ ပြျောပြျောရှငျရှငျနထေိုငျတတျပုံလေးတှကေို ပရိသတျတှေ အခဈြတှပေိုစခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကိုရီးယားနိုငျငံမှာ မေးရိုးပွုပွငျပွောငျးလဲမှုနဲ့ ရငျသားခှဲစိတျမှုကို ပွုလုပျခဲ့တဲ့ သူမကတော့ မကွာခငျက မကျြနှာနဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို ပလတျစတဈဆာဂရြီပွုလုပျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမကတော့ ယခုမှာ သူမရဲ့ခြိုငျးအတှကျ ပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈ laser hair removal session စတငျပွုလုပျနခေဲ့ပါတယျ။ Read more
ပုံမှနျထကျအသကျပိုရှညျနိုငျဖို့ ပိတျရကျတှမှော အိပျစကျမှုပုံစံ
Unicode တခါတလမှောတော့ပိတျရကျတှအေိပျရာထဲမှာအကွာကွီးနဖေို့အကွောငျးပွခကျြပေးရခကျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ဒီသုတသေနအပိုငျးအစလေးကသငျ့ကိုအကွောငျးပွခကျြဖွဈစမှောပါ။ဒီလိုပိတျရကျမှာအကွာကွီးအိပျတာကသငျ့အသကျရှညျစဖေို့အကူအညီဖွဈတယျလို့ လလေ့ာခကျြတှအေရသိရပါတယျ ။ အထူးသဖွငျ့ကွားရကျတှမှောအလုပျအကွာကွီးလုပျရတဲ့သူတှအေတှကျပေါ့။ BrightSide ကပိတျရကျမှာအကွာကွီးအိပျရငျရမယျ့ အကြိုးကြေးဇူးတှကေို သုတသေနလုပျပွီးတငျပွထားပါတယျ။ လလေ့ာခကျြတှအေရ အလုပျပိတျရကျမှာအိပျတာက ပိုပွီးကောငျးတယျလို့ဆိုပါတယျ။ နစေ့ဉျ၈နာရီပုံမှနျအိပျတာကအကောငျးဆုံးလို့လူတှကေယုံကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လလေ့ာခကျြတခုအရ ဒါကအားလုံးမဟုတျသေးပါဘူး ။ တကယျတော့ သုတသေနလုပျပွီးရလာတဲ့ ရလဒျတှအေရ ကွားရကျတှမှောနညျးနညျးအိပျပွီး ပိတျရကျမှာအကွာကွီးအိပျတာကအသကျပိုရှညျစတောပါ။ လလေ့ာခကျြကအိပျခြိနျနဲ့သတေဲ့နှုနျးကိုခြိနျကိုကျပွီးကွညျ့ထားတာပါ။ ဒီသုတသေနက၁၃နှဈအတှငျးမှာ လူပေါငျး ၄၀၀၀၀ နီးပါးကိုလလေ့ာပွီးအစုနှဈခုခှဲထားပွီးလလေ့ာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဆယျနှဈကြျောသုတသေနလုပျပွီး လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှအေရ အလုပျပိတျရကျမှာ ပိုပွီးအိပျတတျတဲ့သူတှကေ ပုံမှနျထနကွေလူတှထေကျ ပိုပွီးအသကျရှညျတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ ZawGyi တခါတလေမှာတော့ပိတ်ရက်တွေအိပ်ရာထဲမှာအကြာကြီးနေဖို့အကြောင်းပြချက်ပေးရခက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီသုတေသနအပိုင်းအစလေးကသင့်ကိုအကြောင်းပြချက်ဖြစ်စေမှာပါ။ဒီလိုပိတ်ရက်မှာအကြာကြီးအိပ်တာကသင့်အသက်ရှည်စေဖို့အကူအညီဖြစ်တယ်လို့ လေ့လာချက်တွေအရသိရပါတယ် ။ အထူးသဖြင့်ကြားရက်တွေမှာအလုပ်အကြာကြီးလုပ်ရတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့။BrightSide ကပိတ်ရက်မှာအကြာကြီးအိပ်ရင်ရမယ့် Read more
”စပိန်နိုင်ငံမှာ စေတီတွေ တည်ပြီး ”ဗုဒ္ဓဘာသာ”ကို စတင်ကိုးကွယ်လို့နေကြပြီ ”
ပညာတွေတတ်ပြီးအကောင်း အဆိုးကို မခွဲခြားနိုင်ရင်အလကားပဲ၊ငွေကြေးချမ်းသာပြီး အတ္တတွေကြီးကာကိုယ့်အိတ်ထဲပဲ ထည့်ဖို့ ကြိုးစားနေရင်လည်းအလကားပါပဲ။အတွေးအခေါ် ဘယ်လောက်မြင့်မြင့်စာနာနားလည်ပေးနိုင်တဲ့ နှလုံးသား မရှိရင်အလကားပါပဲ။ ရုပ်ရည် ဘယ်လောက်ချောချောလူတစ်ယောက်ကို လူလို့ မမြင်တတ်ရင်အလကားပါပဲ။ အသိပညာ ဘယ်လောက်ရှိရှိတစ်ခြားသူပြောတဲ့စကားကို တန်ဖိုးမထားတတ်ရင်အလကားပဲ၊အလုပ်တွေ ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစား ကြိုးစားရိုးသားမှုမရှိရင် အလကားပါပဲ။ ဘယ်လောက်ပဲ တော်နေပါစေ…ကိုယ်ချင်းစာစိတ် မရှိရင် အလကားပါပဲ။ ဘယ်လောက်ပဲ လူကောင်းတစ်ယောက်လို့ကြွေးကြော်နေပါစေ…သူများမျက်ရည်ပါတဲ့ ထမင်းကိုစားနေရင်အလကားပါပဲ အမှန်တရားကို ဘယ်လောက်ပဲ လက်ခံတယ်ပြောပြောကိုယ်မှားနေတာကို ထောက်ပြဆွေးနွေးတာ မကြိုက်ရင်အလကားပါပဲ။ တကယ်တမ်းတော့လူ့တန်ဖိုးဆိုတာ…ထက်မြက်တဲ့ ခေါင်း မဟုတ်ပါဘူး။အခြားသူတွေအပေါ် ကြင်နာတတ်တဲ့ နှလုံးသားဂရုစိုက်နားထောင်ပေးတတ်ပြီး စာနာတတ်တဲ့ နားပေးကမ်းကူညီတတ်တဲ့ လက် Read more
ကားဝယ်စီးဖို့ဒကာမတစ်ယောက်က လှူ ခဲ့တဲ့ အလှူ ငွေ သိန်း(၁၅၀) ကျော်ကို ဆေးခန်းဆောက်ဖို့ပြန်လှူ ခဲ့တဲ့ ဆရာတော်
ကားဝယ်စီးဖို့ဒကာမတစ်ယောက်က လှူ ခဲ့တဲ့ အလှူ ငွေ သိန်း(၁၅၀) ကျော်ကို ဆေးခန်းဆောက်ဖို့ပြန်လှူ ခဲ့တဲ့ ဆရာတော်ဒကာမတစ်ယောက်က ဆရာတော်ကို ကားဝယ်စီးဖို့ အလှူငွေ သိန်း ၁၅၀နဲ့ ဒေါ်လာ (၁၅၀၀) ကို လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ် ဒီအလှူငွေတွေကို ဆရာတော်က ဆေးခန်းဆောက်ဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ နေရာမှာ ပြန်လည်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော်က ဒီအလှူငွေတွေကို ပင်းတယမီးရှင်ဆုရ ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာသန်းမင်းထွဋ်ထံ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်က ခုလိုမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ “ဒကာမကြီးတစ်ယောက်က ဘုန်းကြီးကို ငွေတွေလှူတယ်။ ကားဝယ်စီးဖို့တဲ့” Read more
ပင်လယ်နှစ်ခု ဆုံရာနေရာမှာ တည်ထားတဲ့ သမိုင်းဝင် ဆံတော်ရှင် မြတ်မော်တင်စွန်း စေတီတော်
ကပ္ပလီပင်လယ် (Andaman Sea) နှင့် အနာက်ဘက် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် (Bay of Bengal) တို့ ထိစပ်ရာ၊ (သို့မဟုတ်) ပိုင်းခြားထားရာ နေရာလေးတခုဖြစ်သော၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမိုင်းဝင်တန်ခိုးကြီး ဘုရားစေတီများထဲတွင် တစ်ဆူ အပါအ၀င်ဖြစ်သော၊ ဆံတော်ရှင် မြတ်မော်တင်စွန်း စေတီတော်သည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့နယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏အနောက် တောင်ဘက် အစွန်ဆုံးနေရာတွင် တည်ထားလျှက်ရှိပါသည်။ တဖုသနှင့် ဘလိက္က ကုန်သည် ညီနောင်နှစ်ဦးတို့မြတ်စွာဘုရားအား လျှောက်ထားချက်အရ ပေးသနားတော်မူသော ဆံတော် ရှစ်ဆူအနက် နှစ်ဆူကို ဇေယျသေန နဂါးမင်းက သက္ကရာဇ် Read more
နတျပွညျမှာတညျထားသကဲ့သို့ ကွညျညိုသပ်ပာယျလှတဲ့ စတေီတျော
Unicode ပဲခူးမွို့ရဲ့ အရှပေို့ငျး ဟင်ျသာကုနျးအစုတှငျ အနောကျဖကျဆုံးကတြဲ့ ပဲကူး၊ သုဒဿန၊ မွငျးသီတ၊ မရငျသိန်န၊ မဝေါ ဟူ၍ ခတျေအလိုကျ အမညျပွောငျးခဲ့သော ကုနျးငယျပျေါမှာ ရှမေျောဓောစတေီတညျရှိပါတယျ…မွနျမာနိုငျငံမှာရှိတဲ့ တနျခိုးကွီးဘုရားမြားထဲမှာ ရှမေောဓောဘုရားလညျး တဈဆူအပါအဝငျဖွဈပါတယျ….ပဲခူးမွို့ရဲ့ ကကျြသရဆေောငျဖွဈပွီး ပဲခူးနယျတဈဝိုကျတှငျ အထငျရှားဆုံး သာသနိက အဆောကျအအုံ တဈခုလညျး ဖွဈပါတယျ… စတေီရဲ့ သမိုငျးကတော့ ကုနျသညျညီနောငျနှဈဦး(တဖုဿ နှငျ့ ဘလိက မဟုတျပါ။)က မွတျစှာဘုရားထံမှ ဆံတျောနှဈဆူပငျ့ဆောငျလာပွီး ပဲခူးဒသေမှာ စတေီတညျထား ဌာပနာခဲ့ကွပါတယျ… ဘုရားသမိုငျးက အမြိုးမြိုးကှဲပွားနပေခေဲ့သျောလညျး အမြားအားဖွငျ့ ဘိုးတျောဘုရားလကျထကျ Read more
သိနျးခြီပေးပွီး ဝယျသှားတဲ့ မွနျမာ့ငါးကွီး
Unicode ကကူရံဟာ ပငျလယျငါးတဈမြိုးဖွဈပွီး စားလို့ကောငျးတဲ့ ငါးဖွဈပါတယျ…..နိုငျငံခွားမှာ ကကူရံကိုတော့ အိန်ဒိယဆာမနျလို့ ချေါကွပါတယျ…. ကကူရံကို မွနျမာတှတေျောတျောမြားမြားစားကွပါတယျ…. ၏ မွနျမာနိုငျငံမှာ လူကွိုကျမြားတဲ့ ငါးလို့တောငျ ဆိုရမှာပါ…..ဒါ့အပွငျ ကကူရံငါးကနေ ကျောလုပျတဲ့ စညျဖောငျးရတဲ့ ပငျလယျငါးကွီးတဈမြိုးလညျး ဖွဈတာကွောငျ့ တနျဖိုးရှိပါတယျ…ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးက လပှတ်တာမွို့ငါးဒိုငျတဈခုမှာ အခြိနျ ၂၃ ပိဿာ ၇၀ ကပျြသားရှိတဲ့ ကကူရံ ငါးကွီးတဈကောငျဖမျးဆီးရမိခဲ့ပါတယျ….ဒီငါးကိုရောငျးခရြမှာတော့ မွနျမာငါးတဈကောငျအနနေဲ့ အံ့အားသငျ့ဖှယျ ငှသေိနျးခြီနဲ့ ရောငျးခနြိုငျခဲ့တာပါ….. ဒီငါးကွီးကိုရောငျးဈေးက ၁၃ သိနျးခှဲထိ ရရှိခဲ့တာပါ…ငါးတဈကောငျကို ၁၃ သိနျးခှဲဆိုတော့ Read more
ဆင်းရဲသား လူနာတွေ အတွက် အခမဲ့ ကုသပေးတဲ့အပြင် နေ့လည်စာပါ စီစဉ်ပေးတဲ့” ညောင်လေးပင်က နှလုံးလှ ဆရာဝန်ကြီး”
ဆင်းရဲသား လူနာတွေ အတွက် အခမဲ့ ကုသပေးတဲ့အပြင် နေ့လည်စာပါ စီစဉ်ပေးတဲ့” ညောင်လေးပင်က နှလုံးလှ ဆရာဝန်ကြီး”ညောင်လေးပင်က အဲဒီဆရာဝန်အကြောင်း ပြောချင်လာတာ လျှာယားနေပြီဗျာ..ဘယ်နှယ့် ဆရာဝန်သာဆိုတယ် လူပုံပန်းက မိုက်ကျစ်ကျစ်ရယ်..စကားပြောကလည်း ဒုံးတိတိနဲ့ ဆိုတော့ သူ့ကိုမသိတဲ့လူတွေကို ဘုရားစူးမိုးကြိုးပစ် ကျိန်ပြောရင်တောင် ဆရာဝန်လို့ မယုံဘူး စိတ်ချ။ တစ်နေ့ပေါ့.. ဂေဟာမှာ ခိုလှုံနေတဲ့ ဖဒိုသူ ကိုယ်ဝန်သည်တစ်ယောက်က ဖဒိုဆေးရုံမှာ သူ့ကိုသိတဲ့သူနဲ့ ဆုံမှာစိုးလို့ ညောင်လေးပင်ဆေးရုံမှာမွေးပါရစေ ဆိုတာနဲ့ အဲဒီဆရာဝန်ကြီးနဲ့ ဆုံကြတာ ဒေါက်တာ သောင်းဒန်ဦး (ညောင်လေးပင် ဆေးရုံအုပ်ကြီး..)ပေါ့..လူတင်မဟုတ် Read more
ကျောင်းစရိတ်လေးရအောင်ကျောင်းကအပြန် ဖိနပ်ချုပ်ဆိုင်ဖွင့်ပြီး ပိုက်ဆံရှာတဲ့မောင်နှမ၂ယောက်
Zawgyi ကျောင်းစရိတ်လေးရအောင်ကျောင်းကအပြန် ဖိနပ်ချုပ်ဆိုင်ဖွင့်ပြီး ပိုက်ဆံရှာတဲ့မောင်နှမ၂ယောက်မိဘပေးတဲ့ မုန့်ဖိုးကို ယူပြီး ကျော့ကျော့လေး ကျောင်းတက်နေတဲ့ သူတွေရှိသလို ကိုယ့်ကျောင်းစရိတ်အတွက် ကို ကိုယ်တိုင်ရုန်းကန်နေရတဲ့ သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒီလိုရုန်းကန်နေရတဲ့ သူတွေထဲကမှာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Puerto Princesa မြို့ မှာနေထိုင်တဲ့ မောင်နှမ နှစ်ယောက်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။သူတို့ကတော့ အသက် ၁၃နှစ်အရွယ် Manuelita Borbon နဲ့ အသက် ၁၂နှစ်အရွယ် Micko Borbon ဆိုတဲ့ မောင်နှမ နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၈တန်းနဲ့ ၇တန်း အသီးသီး တက်ရောက်နေတဲ့ အလယ်တန်း ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဖြစ်ပြီး Read more